Yulia Tymoshenko neze sezombusazwe ongenalwazi, nakuba ibinzana eyashiwo ke, ngezinye izikhathi ufake kumile interviewers isiko laso ongaphakeme. Uneziqu labavoti wakhe siqu, nokudala isithombe ngaphakathi, avame ukuba izivumelanise nemibono yakhe mayelana nendlela bheka izwi salokhu ingxenye umphakathi Ukraine.
Ngo-March 1995, ibhodi sisekelo, okuyinto landizela "igesi inkosazana", wenziwe kokwehla eziphuthumayo Zaporozhye, engakafiki sezindiza laseDnepropetrovsk okuyinto akalithabathanga izimo zezulu. Customs, emuva kokufuna indiza wathola semali izimali zakwamanye amazwe, futhi lo mbhangqwana Tymoshenko kwadingeka achithe ambalwa nobusuku obungamashumi etilongweni kulo muzi, baze yasizwa Pavel Ivanovich Lazarenko, umngane omkhulu umndeni kanye uNdunankulu. Ngokushesha United Energy Systems Ukraine zadalwa - corporation okuyinto unezinkolelo zonke emakethe igesi yemvelo. Kanjani izinkulungwane zezigidi zamaRandi ngonyaka Nilethé lo isakhiwo yezwe, kunzima ukuba acabangele, futhi akukho namuhla umuntu ofaka lo mgomo.
Ngemva icala lobugebengu phezu Lazarenko waboshwa futhi isandla sakhe sokunene - Yulia Tymoshenko. Yini ukubeka inhloko ayeqondiswe ku 2001? Impendulo yalo mbuzo kufanele itholwe uma owawushade uNdunankulu, tomivshegosya iminyaka eminingi emajele American. Lokhu pair buxhunyaniswe by izithakazelo ibhizinisi langempela, futhi ukuthi umsizi ulandela imiyalelo nganoma iyiphi indlela ke kalungisiswa kuphela.
Tymoshenko futhi Yushchenko
Ngo-2005, Tymoshenko isuswe esikhundleni sakhe uNdunankulu, wayengenakukwazi yokuthola ulimi olulodwa kanye Viktor Yushchenko, owayeneminyaka kakhulu abalamacala wakhe nge ukunqoba kwakhe ngesikhathi Orange Revolution. Abaningi babheka ngesikhathi lesi sinyathelo kaMengameli Ukraine wokungabongi.
Ngaphezu kwalokho zimpi kokuphikisa ex-uNdunankulu wawutholakala ikakhulu wagxeka izenzo zikahulumeni pro-Russian ezakhiwe Victor Yanukovich, leitmotif zako ezisemqoka kwaba umugqa phezu Ukrainization okugcwele inqubomgomo Ukuhlanganiswa yaseYurophu, ehambisana ne-uzibuse ingxenye labavoti. Izingcingo for ekuqiniseni ubumbano lukazwelonke yezwakala kusukela kwezindonga zejele.
Kusukela ngo-2005 Tymoshenko uye waveza ngokuphindaphindiwe ukungavumelani yayo nge izici ezingokomthetho igesi yemvelo izimpahla Ukraine. inkampani elingumlawuli lapho ukuthengwa wabizwa ngokuthi "RosUkrEnergo" futhi kwakungekaNkulunkulu abanikazi ezintathu: "Gazprom" (50%) kusukela ohlangothini Russian futhi Firtash (45%) kanye Fursin (5%) - ne-Ukraine. Ukuze ezinye zezizathu, uMongameli Yushchenko akwazile okwesikhathi ubudlelwane enjalo ukuhweba inqubo, futhi ngesisekelo salokhu ukuthi babexabene kukaNdunankulu. Lesi simo saqhubeka kwaze kwaba ngo-2008, lapho umthengi ilungelo kwaba "Naftogaz Ukraine". Lokhu kwenzeke ngenxa yokungakhokhi ka "RosUkrEnergo" nesikweletu 4 bhiliyoni amamitha intilibathwa igesi kukhiqizwa ekupheleni 2007.
Zonke gone - okusebenza
Unentshisekelo isikhundla kaMengameli uViktor Yushchenko owavuma oda ngqo ukuze ujike zonke izingxoxo, ukuba asayine isivumelwano esisha kanjalo wangabaza ukulondeka kwezomnotho wezwe. Ngo-October 2008, lapho isitokwe nesikweletu $ 2.2 billion, futhi ukungabi khona izivumelwano kwaba nethemba langempela kakhulu ukuvala shaqa okuphelele gas supply Ukraine. Ukusayinwa inkontileka kwakuhlelwe usuku lokugcina 2008. Estranged kusukela ukungqubuzana bonke abaholi yezwe. Ukuphikiswa Kwezindaba ukusungulwa Ukrainian izimpahla ngqo ngaphandle labalamuli, yaphawula, icala langasezantsi libe Russian. Ngenxa yalokho, kusukela ngo-January 1, 2009 valve yavalwa.
Ukusayinwa inkontileka nemibandela
Januwari 18 Lememorandamu isayinwe okwamanje. Ohlangothini Russian e ukwamukelwa kwako kwakufana V. Putin, Ukraine - Yulia Tymoshenko. Yini wafaka wakhe uphethe umthwalo ukuxoxisana eMoscow, kuyilapho abanye kubaholi waphumula, uKhisimusi kanye Year New? Kwakubhapathizwa. Imibandela abangu uthathwa kwimboni azinzima kangako, futhi intengo - (. Kufika ku- $ 376 ngamunye 1,000 cu m) engakaze ibonwe okusezingeni eliphezulu.
Icala lobugebengu wasungulwa ngaphansi kukaMengameli Yushchenko, ngakho icutshungulwe okwengeziwe kakade ngaphansi Yanukovych ayikwazi uyafaneleka a ukujeziswa zezombusazwe ngokumelene Patriot benziwa "pro-Kremlin" Imodi. Kusukela umbono izintshisekelo Russian kunzima overestimate ngenkonzo kwadingeka eMoscow Yulia Tymoshenko. umusho Ejele ababelwe kuzo njengoba isijeziso, wayeneminyaka eyisikhombisa.
Njengoba egqunywe lapho isiboshwa abadumile cishe njalo usesibhedlela. Olunye ulwazi leaked ukuba yahlulele ukuthi ukugula okungathí sina, wamane wazitshaya.
Sikhishwe zonke izimo lapho kwakukhona basayine izivumelwano igesi, kuyoba nzima ukuba aveze ukuthi uhleli Tymoshenko. Tymoshenko landizela eMoscow ngenxa yokuthi iningi labantu ayengakwenza akekho noma ngeke esaphinda. ubudlelwane Ukrainian-Russian iye yabhuntsha ngenxa yenqubomgomo lingahambisani nongenamusa bezingelwa Yushchenko abaphathi, izinsongo njalo ukubusa wezwe NATO kanye nokwenqaba ubudlelwano obuhle bokwakhelana. Uma Yushchenko wathatha ithuba fly to the izinkulumo elimhlophe-itshe, neze waqala naye ukukhuluma, futhi Putin and Medvedev ingasaphathwa iyiphi intuthuko. Lindela ukuthi valve kuvula ngokwalo, liphinde akudingekile. isimo Lungile ngandlela-thile ayengakwenza Yulia kuphela Tymoshenko. Ngenxa yaleso ukubeka yakhe yokuqala esigcawini sokubonisana, sabe Kachanivska ekoloni lokujeziswa? Kungakhathaliseki ukuthi bekusuke eyisiboshwa sezombangazwe? Kwakungenzeka yini ukuba senze okuphambene? Kunemibuzo eminingi, kodwa nezimpendulo ezimbalwa.
Kodwa lutho ihlala kuze kube phakade. Enye Maidan kwenzeka eKiev ngo-2013, alethwe amandla abamele iqembu "lawobaba", eliholwa Yulia Tymoshenko. Ngenxa yaleso ukubeka wangaphambili undunankulu, manje akunandaba, kusukela ezinsukwini zokuqala ngxabano, yena besekele ukunyakaza pro-European esuka ejele eyincenga izihlubuki ukulwa kuze kube sekupheleni, ungahawukelanga ezimpilweni zabo siqu. Futhi lokhu ukukhala abangophakimpi yezwakala.
Yulia Tymoshenko wadedelwa Februwari 22, 2014 ngokushesha ngemva ebalekela Ukraine Yanukovych. Ukubuya kwaba yokunqoba, futhi ephelezelwa isithombe vozdevaniyami izandla Rolling Eyes futhi posturing nge lube ukuzikhohlisa ukuphasa buthaka kusuka njalo amanga izinyawo, zigqokiswe ezicathulweni ephezulu heeled. I reception zenzeka ngaso sonke ukuphulukisa le-US Embassy Nokho, yesikhathi esifushane neyezinto ichaza ngokusobala ngokuyisimangaliso emkhathini ekhethekile ka ukusungulwa.
Naphezu kweqiniso lokuthi manje akukho lutho ekuqedeni inkinga ukuphenywa kokuphulwa "umbuso onegazi Yanukovich" ubugebengu, uhulumeni entsha evula ekujaheni ukubhekana nalezi zimo icala okuyinto Walahlwa Yuliya Timoshenko. Yini ubeka ke, futhi manje-ke akusho lutho, kodwa Olwa esiyinhloko Mace kamongameli Petro Poroshenko uye wacela ngesizotha indlovukazi ningahlubuki ukuthatha incenye abavoti. Yena okholwa ukuthi uma amabutho ukuthi bazibiza yeningi, bazocula nomunye ikhandidethi, ukunqoba uzokuthola ukuwina ngomzuliswano wokuqala. Klitschko bavumelana. Lady Yu ukukholisa kuhlulekile.
Amehlo evuvukele ingane. aphathe ndawonye
Amazambane athosiwe e Aerogrill